Ungangeza kanjani ukuxhumeka kwe-inthanethi okubili kokulanda okusheshayo | Izindaba zamagajethi
Ukube besinolwazi olunzulu lwekhompiyutha, lo msebenzi ungaba omunye wezinto ezilula ukuzenza, njengoba kunamathuluzi ambalwa lapho opharetha kufanele azi khona sebenzisa imiyalo ethile, izivumelwano namachweba ukwazi ukujoyina ukuxhumana oku-2 kwe-inthanethi kokukodwa.
Ngeshwa, abantu abavamile bayaphatha ukuphatha i-computing kuya ezingeni eliphakathi, okungadingi ukwazi okuningi, ngoba asinantshisekelo yokwenza lolu hlobo lwemisebenzi kaningi empilweni. Ngaphandle kokufaka izifundo ezenziwa ngekhompyutha noma amanethiwekhi ne-Intanethi (okuvamile noma okungenantambo) ngezansi sizokhuluma ngohlelo oluthandekayo esingalusebenzisa ngalesi sikhathi, ukuze sikwazi ukwengeza ukuxhumana oku-2 kwenethiwekhi.
1 Izidingo ezidingekayo zokwengeza ukuxhumana oku-2 kwe-Intanethi
2 Isebenza kanjani le software ukwengeza ukuxhumana oku-2 kwe-inthanethi
Izidingo ezidingekayo zokwengeza ukuxhumana oku-2 kwe-Intanethi
Kunezidingo ezithile ezibalulekile lapho kuzanywa ukwenza lo msebenzi, noma ezinye zazo zingasetshenziswa kalula uma sinesandla esiseduzane nathi. Ngokuvamile, singahle sizibhale lezi zidingo ngokulandelayo:
Ukuxhumeka kwe-inthanethi okungu-2.
Okunye ukuxhumana kufanele kube yi-Wi-Fi kanye nenye i-Ethernet (Lan).
Isicelo esilula esengeza kulezi zixhumo ze-inthanethi ezi-2.
Ngaphandle kwesizathu sizama ukudalula ithuluzi elisalikhuthazayo njengamanje, yize kufanelekile ukusikisela kumfundi ukuthi lingasetshenziswa landa ngokuphelele mahhala ngemikhawulo ethile, kunethuba lokuyithola ngenani lama- $ 20 ukusebenzisa le layisense kumakhompyutha ahlukene ama-3 uma usebenzisa isigqebhezana, into esiyenzile nokuthi kungani sichaza indlela yokwenza lo msebenzi okwenzelwe abaningi, enye yezinto ezifunwa kakhulu kwi-Intanethi.
Ngokuqondene nemfuneko yokuqala, kusobala sizodinga ukuxhumana oku-2 okwehlukile kwe-Intanethi, enye yazo kungaba ngeyethu esisebenza ngayo ekhaya, kanti enye engaba eyomngani ohlala eduze kakhulu nathi.
Ngokwesidingo sesibili, ikhompyutha yethu ingaxhuma nge-Ethernet port (Lan) ngekhebula elifanele, kanti olunye uxhumano lwe-Intanethi kufanele kube yi-Wi-Fi, okumele siyibuze umakhelwane noma umngane wethu, uma singakaqashi eyengeziwe ezosebenza. Kufanele kuphakanyiswe ukuthi uma sizoboleka uxhumano lwe-Wi-Fi kothile, lowo muntu kufanele uhlale eduze kakhulu nathi ngenxa yobubanzi bokusabalala lokho kungaba nokuxhumana okunjalo.
Isoftware esizoyisebenzisa ivela esandleni se- Xhuma, lapho ungakwazi khona landa kusuka kusixhumanisi esisemthethweni kuwebhusayithi yakho.
Isebenza kanjani le software ukwengeza ukuxhumana oku-2 kwe-inthanethi
Ingxenye ebaluleke kunazo zonke, sizokuchaza ngalo mzuzu; Lapho usulande futhi wafaka isoftware, izokucela ukuthi uyiqale kabusha ikhompyutha ukuze ushintsho olwenziwe yilolo hlelo luqale ukusebenza. Noma ngabe iyiphi inketho okhethe ukuyikhetha ukwazi ukuyenza engeza ukuxhumana oku-2 kwe-inthanethi, kuzo zonke izicelo ezi-2 zizovulwa ngasikhathi sinye, esisodwa esinegama le- Dispatch nokunye okufana nalokhu I-HotspotOwokuqala kube nguyena osithandayo kakhulu okwamanje.
Well, iwindi ongalithanda phezulu kusikhombisa ukuxhumana oku-2 kwe-Intanethi okungeziwe (ukusebenza ndawonye) kukhompyutha eyodwa; Ukuze sifeze lokhu, kukhompyutha kufanele sixhume kunethiwekhi ye-Wi-Fi nokhiye wokufinyelela ofanele we-akhawunti yokuqala ye-Intanethi futhi kamuva, sixhume ikhebula le-Lan ethekwini kodwa nenye i-akhawunti ye-Intanethi. Isamba siqondile, okungukuthi, umkhawulokudonsa onikwe i-akhawunti ngayinye kulawa azofakwa ngqo.
Ukusetshenziswa okuhle okusebenzayo ukwenza lolu hlobo lomsebenzi uma sizolanda amafayela anzima kakhulu kwi-Intanethi, yize kufanele sisebenzise umphathi wokulanda onjenge uTorrent noma enye into ehambisana nethuluzi. Ngokudabukisayo umphumela ofanayo ngeke utholakale ekuphequluleni kwethu iwebhu, ngoba iGoogle Chrome noma iFirefox neInternet Explorer izosebenzisa kuphela ukuxhumana okukhona ngokuzenzakalela kukhompyutha, kulokhu kube yi-Ethernet.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungangeza kanjani ukuxhumeka kwe-inthanethi okubili kukhompyutha eyodwa